पर्शुराम नगरपालिकामा बस दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते
डडेलधुरा । डडेलधुराको पर्शुराम नगरपालिका–१२, तुलाभाडीनजिकै बस दुर्घटना हुँदा १४ जना घाइते भएका छन् ।
गुल्मीमा माओवादीले लुकाएर राखेको बम भेटियो
काठमाडौं । तत्कालिन माओवादीले लुकाएर राखेको हतियार भेटिएको छ । गुल्मी जिल्लाको एक घनघोर जंगलमा लुकाएर राखेको एक थान राइफल र सकेट वमहरु हतियार भेटिएको हो ।
पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक ४० हजार बनाउन माग
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको तलब दोब्बर गराउन माग गरेको छ । पत्रकारको न्यूनमत पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आइतबार महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्यसचिव बालकृष्ण घिमिरेलाई पाँच बुँदे मागपत्र बुझाएको हो ।
झापा । निधन भएका ससुराको काजकिरिया गर्न घरको बुहारीलाई वञ्चित गर्ने झापा अर्जुनधारा–८ निवासी तिलक गौतमको परिवारलाई स्थानीय सिंहदेवी समाज सुधार समितिले सामाजिक बहिष्कार गरेको छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल एक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने
काठमाडौँ । आगामी एक वर्षभित्र गौतमबुद्ध विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।
धादिङ । धादिङबेंसी नगर विकास समितिका पूर्वाध्यक्ष केशवराज अधिकारीको आज करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ ।
काठमाडौँ । कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर युवालाई सहभागी गराइने बताएका छन् ।
इन्भेष्टमेण्ट एण्ट फाइनान्स कम्पनीको आम्दानी १ सय ३५ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाण्डौ । श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले १ सय ३५ प्रतिशतले आम्दानी वृद्धि गर्दै आ.व. २०७३-०७४ मा रू. १३ करोड ६ लाख मुनाफा कमाएको छ ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन, पत्रकार र साहित्यकारलाई सम्मान
काँकडभिट्टा । भानु साहित्यिक प्रतिष्ठान मेचीनगरले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन, पत्रकार र साहित्यकारलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ ।
युवाहरुले जुटाए क्यान्सर पिडितको उपचारका लागि रकम
गोरखा । शहिद लखन गाँउपालिका वडा नम्बर ८ बुङकोटका युवाहरुले क्यान्सर पिडितको उपचारका लागि ६ लाख रकम जुटाएका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमार्फत उनीहरुले बुंकोट कै क्यान्सरपिडित पूर्णबहादुर श्रेष्ठको उपचारार्थ सहयोग रकम जुटाएका हुन् ।